Tababar uga furmay G/Awdal shaqaalaha kaadh ee ka hawl galaya Gobolka. | Somaliland National Electoral Commission
Home 2017 April 22 trainings Tababar uga furmay G/Awdal shaqaalaha kaadh ee ka hawl galaya Gobolka.
Tababar uga furmay G/Awdal shaqaalaha kaadh ee ka hawl galaya Gobolka.
(NEC Training Department)
Waaxada tababarada KDQ oo u bilaabay tababarkii shaqaalaha KDQ ee kaadh bixinta Gobolka Awdal. shaqaalahan oo mudo laba casho ah ku tababaranaaya shaqada kaadh qaybinta codbixiyaha ee ka bilaabmi doonta Gobolka Awdal dhamaadka bishan April. Shaqaalahaas oo tababarka ka bacdi lagu dhaarin doono xubnaha Guddida KDQ ee ku sugan Gobolka Awdal hortooda .
Filed in: trainings
Somaliland National Electoral Commission kicked-off Data entry & Complaint Management training
Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo maanta bilaabay tababarka habka loo maamulayo cabashooyinka